nazi iiapos zabasebenzisi be-iphone abangayinqanda njani i-airdrop ekuvuzeni idatha yobuqu kubagculeli
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Nazi iiapos zendlela abasebenzisi be-Apple iPhone abangayimisa ngayo i-AirDrop ekuvuzeni idatha yobuqu kwabagculeli
Nazi iiapos zendlela abasebenzisi be-Apple iPhone abangayimisa ngayo i-AirDrop ekuvuzeni idatha yobuqu kwabagculeli
I-AirDrop luphawu oluvumela apile Abasebenzisi besixhobo sokuthumela nokufumana iifoto, amaxwebhu, kunye nezinye iifayile kwi-iPhone ekufuphi okanye ezinye izixhobo zeApple ezihambelanayo ngaphandle kokusebenzisa iselfowuni okanye iWi-Fi. Inqaku lifuna ukuba omabini amaqela abe neBluetooth kunye neWi-Fi ivuliwe. Kungenxa yokuba i-AirDrop ixhomekeke kwi-Bluetooth Low Energy (i-Bluetooth LE) ukusasaza kunye nokufumana unxibelelwano olukufuphi, kwaye ngelixa inethiwekhi ye-Wi-Fi ingafuneki ukuze i-AirDrop isebenze, iifayile zihanjiswa nge-point-to-point Wi-Fi.
Ukuxhaphaza i-AirDrop kunokusetyenziselwa ukubamba inombolo yakho yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile
Emuva ngo-2018, Abanye abasebenzisi be-iPhone babefumana into eyaziwa ngokuba yi-cyber-flashing apho iifoto ezibonisa ngesondo zazithunyelwa ngokungahleliwe zisuka kumsebenzisi we-iPhone kwiindawo ezikufutshane (ezinje ngomgaqo ongaphantsi komhlaba okanye inqwelomoya) kumsebenzisi we-iPhone ongalindelanga onakho ukwala ukufumana i-AirDrop. Kodwa umfanekiso omkhulu ngokwaneleyo ukuba ungakhubekisa ekujoliseni okungahleliwe kufunyenwe nangaphambi kokuba ixhoba libe nethuba lokwala iAirDrop.
Ukuba semngciphekweni kwe-AirDrop kuvumela abahlaseli ukuba bebe inombolo yomsebenzisi kunye neapos, kunye nenombolo yedilesi ye-imeyile Njengoko sikuxelele ngelo xesha, eyona ndlela yokuthintela oku yayikukutshintsha useto ukwenza ukuba ifowuni yakho ifumaneke 'kuNxibelelwano kuphela' kubo bonke abantu. Ngaphandle kokuba unee-pervs kuluhlu lwakho lwabafowunelwa, le ntshukumo kufuneka ikusindise ekufumaneni imifanekiso engafunekiyo yesondo nge-AirDrop. Kwaye hayi, ukukhanya kwe-cyber ayisiyiyo i-Apple eyilele iDrop Drop .;
I-AirDrop ikwiindaba kwakhona namhlanje emva kokuba abaphandi baseJamani kunye neApos's Technische Universitat Darmstadt befumanise into ekubiza ngokuba yi & apos; ukuvuza okuyimfihlo kakhulu okunokudlula kumsebenzisi we-iPhone kunye nenombolo yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile kubantu ongabaziyo ngaphandle kwemvume. Yonke into efunwa sisigebenga sisixhobo esinokunxibelelana ne-Wi-Fi kwaye sikufuphi kwisixhobo seApple esinephepha lesabelo elivulekileyo.
Njengoko inkampani yophando yaseJamani yabhala kwibhlog yabo (nge AppleInsider Njengedatha e-ethe-ethe ikwabiwa ngokukodwa kubantu esele besazi, i-AirDrop ibonisa kuphela izixhobo ezamkelayo ezivela kwincwadi yeedilesi zonxibelelwano ngokungagqibekanga. Ukuchonga ukuba ngaba elinye iqela lingunxibelelwano, i-AirDrop isebenzisa indlela yokuqinisekisa efanayo ethelekisa inombolo yomsebenzisi kunye neefowuni kunye nedilesi ye-imeyile kunye namangenelo akwezinye incwadi zeedilesi zomsebenzisi. ' Ngelixa le datha ibhalwe ngokufihlakeleyo ngu-Apple, abaphandi bathi indlela ye-hashing esetyenziswe sisixhobo esikhulu ingaguqulwa ngokusebenzisa uhlaselo lomkhosi olunamandla.
Ngelixa abaphandi baphuhlise isisombululo esibizwa ngokuba yi-'BucalaDrop 'ethatha indawo yokusebenzisa idatha ekhawulezileyo ngenkqubo ekhuselekileyo yokubhala, abasebenzisi banokuthintela ukunikezela ngenombolo yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile ngokuseta i-AirDrop ukuba' ifumane 'kwisixhobo sayo ngelixa igcina isabelo iphepha livaliwe. Kukho ngaphezulu kwe-1.5 yezigidigidi izixhobo ze-Apple ezinokubethwa kolu hlaselo kwaye abaphandi baxelele u-Apple malunga nokuba sesichengeni ngoMeyi 2019. Ukuza kuthi ga ngoku, iApple ayiphumelelanga ukuyivuma ingxaki kwaye ayikatsho ukuba isebenza kwisisombululo.
Iphepha lezesayensi malunga nokuxhaphaza labhalwa ngabaphandi kwaye liza kuboniswa ngabo kwi-USENIX ungcelele lokhuseleko ngo-Agasti. Mhlawumbi ngelo xesha iApple izakuva uxinzelelo lokukhanya kule ngxaki kwaye iqale ukusebenza kwisisombululo esiza kulungisa ingxaki. I-AirDrop iyafumaneka kwizixhobo ezithile ze-Apple kubandakanya i-iPhone 5 okanye entsha, i-iPad yesizukulwane se-4 okanye entsha, yonke i-iPad Air, i-iPad Pro, iimodeli ze-mini ze-mini, isizukulwane sesihlanu se-iPod touch kunye ntsha, ngayo yonke i-iOS 7 okanye kamva.
Ikwafumaneka kwiiMacs ezithile ezisebenzisa iMac OS X 10.7 kwaye kamva (nge-bar yecala lokuFumana). KwiiMacs ezixhaswe yi-OS X 10.8.1 okanye kamva zisebenzise ukhetho lwemenyuYiya→Umoya womoyaokanye ucofe iqhoshaShift+Myalelo+R).
UApple wazisa umgca wayo omtsha weMagSafe wezincedisi ngokutyhilwa kochungechunge lwe-iPhone 12. Sikhethe ezona zilungele wena kwaye unokufumanisa ukuba zeziphi izinto ezincedisayo ngokuchofoza kwikhonkco.
I-64gb yanele iphone
I-oneplus 7 pro vs iphone xr
Ukudibanisa umlawuli wePlayStation 4 kwi-Sony Xperia Z3 okanye ezinye izixhobo ezihambelana neXperia
Idili: Umda we-Samsung Galaxy S7, entsha kunye engavulwanga, yi- $ 80 isaphulelo kwi-Best Buy
I-T-Mobile kunye neapos; esona sicwangciso sitshiphu se5G siba ngcono nangokuphuculwa kwedatha
Ukuhlaziywa kwe-AT & T kwi-Samsung Galaxy S4 kwi-Android 5.0.1
Izivumelwano ze-AT & T ezimnyama zangoLwesihlanu ngoku zibukhoma, fumana simahla i-iPhone 7 ngesicwangciso seDirecTV
Ukudlala iimuvi kuGoogle kunye neTV ye-Android ihlaziywa ngokudityaniswa kwenkonzo yokudityaniswa
Ookumkani bendawo yokugcina: ii-smartphones ezine-128 GB yememori yangaphakathi
Uyidlala njani iividiyo zeYouTube kunye nomculo ngasemva kwi-Android (ingcambu)
Iapile kunye neapos; s i-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus zithengiswa kwi-Best Buy ngezicwangciso zokuhlawula